ထာဝရ ​မေ​မေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ထာဝရ ​မေ​မေ	5
Posted by ကာရံ on Mar 26, 2015 in Poetry |5comments
Love you forever မေမေ
အားမငယ်​ပါနဲ့ သားတို့ရင်​မှာ​မေ​မေက ထာဝရပါ
​မေ​မေ့အပြုံးရိပ်​ပါ ​​မေ​မေ့​မေတ္တာရိပ်​က ​အေးမြတဲ့စမ်း​ချောင်း​လေးပါ
​ပျော်​မြူး​နေကြတယ်​ ​မေ​မေသိပါ​စေ​လေ
​မေ​မေသိ​စေ love you forever ​မေ​မေ​ရေ
ကာရံ ၁၂့ ၂့ ၂၀၁၅
Nilar Han Thaung says: Love you forever Mom.
lu lu says: အမေနဲ့ ပတ်သက်လာတိုင်းမရိုးနိုင်အောင် ခံစားတတ်တာ အမေ့မေတ္တာတွေကြောင့် လား
Alinsett@Maung Thura says: ကျနော့်မေမေက…သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမလေးယောက်လုံးကို…
တစ်ကိုင်းထဲနားတဲ့ ငှက်ကလေးတွေ သိပ်ပျော်မှာပေါ့လေ….. ပျော်တာပေါ့….မော်တာပေါ့…ဆိုတဲ့ သီချင်း..
အမေ အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းနေမှာပေါ့….
အဲ့သီချင်းဖွင့်သံကြားရင်…မေမေဆိုတာလောက် ဘယ်သူဆိုတာမှ မကောင်းဘူးလို့…တွေးမိနေကျ… အခုလည်း..အဲဒီသီချင်းဖွင့်ရင်… အမေ လိုက်ညည်းတတ်တုန်း… အဝေးရောက် သားတစ်ယောက်နဲ့ သူ့မေမေကြားက…အလွမ်းနဲ့ တမ်းတ သတိရစိတ်တွေကို….
.တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင်… ထပ်တူထပ်မျှ မချိမဆန့် ကြေကွဲရပါတယ်ကွာ…
ကာရံ says: အား​ပေးလို့သူငယ်​ချင်း​တွေကို​ကျေးဇူးအထူးတင်​ပါတယ်​​နော်​
kai says: အဖေအတွက်လည်း.. ထည့်တွက်ပါဦး…
သားသမီးဆိုတာ.. အမေတယောက်ထဲမဟုတ်..အဖေရှိမှဖြစ်တာပါလေ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.